Ogige National Krka, na Croatia | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Croacia, Ihe ị ga-ahụ
Croacia, a ọhụrụ pealu na European njem nleta map, nwere ọtụtụ ebe nke oké eke mara mma na otu onye n'ime ha bụ Ogige Ugwu Krka. Ugbu a oge ọkọchị na-eru nso ma ị pụọ n’èzí ghọrọ ihe dị mkpa, kedu maka ịga njem na Croatia na ịmara ya?
Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ogige ntụrụndụ mba dị na mba ahụ wee kpọọ ya aha n'ihi na ọ gafere Osimiri Krka, osimiri a maara maka iyi mmiri ya mara mma, nke dị na mpaghara Dalmatia, nke nwere isi iyi ya na nso ókè ya na Bosnia na Herzegovina. Are dịla njikere maka njem, njem ụgbọ mmiri na ịbanye n'ime mmiri iyi?
1 Ogige Ugwu Krka
2 Nlegharị anya na Krka National Park
Ogige Ugwu Krka
El Osimiri Krka Mgbe ahụ a na-amụ ya na ụkwụ nke ugwu Dinara, na-abanye na ndagwurugwu Knin, na-etolite mmiri mmiri na olulu ma na-asọba n'ime ime nnukwu ọwa mmiri 200 mita miri emi. Site ebe ahụ Krka National Park na-amalite ma na-etolite mmiri mmiri na ọdọ mmiri ọzọ ruo mgbe ọ ga-esi n'oké osimiri na-agagharị na nsọtụ Bay nke Sibenik, jikọtara Oké Osimiri Adriatic. Ọ na-ekpuchi ngụkọta nke nanị ihe karịrị 72 kilomita tinyere nke enwere ihe mmiri mmiri asaa.
Ogige ọ dị nso na obodo Sibenik ọ bụkwa ebe echekwara kemgbe etiti afọ 80. O nwere ngụkọta nke kilomita 109.
Nlegharị anya na Krka National Park
I nwere ike iku otu njem mmụta site na Omis, Makarska ma ọ bụ Split. E nwere ụlọ ọrụ na-ahazi otu dị iche iche wee bịa ma banye n’ụgbọ ala ma ọ bụ obere obere. O doro anya na ị nwekwara ike banye ụgbọ ala site na Zadar, Split, Dubrovnik, Zagreb ma ọ bụ Sibenik.
Sibenik bụ obodo kacha nso mana Zadar na Split anọghị ebe ahụ. Na mkpokọta, ebe ọ bụ na ogige ahụ dị nso n'ụsọ osimiri, ndị na-agagharị n'ụsọ osimiri Croatian na-eleta ya. Otu awa site na ogige ahụ bụkwa ọdụ ụgbọ elu nke Split na Zadar ma site ebe ahụ ị nwere ike ịga ọdụ ụgbọ ala ma buru otu Skradin, nke ahụ bụ ebe ọnụ ụzọ ogige ahụ dị. Hapụ otu awa na ọkara ka ị gaa.
N'ime ọtụtụ nhọrọ, ihe kachasị mma bụ ịga n'ụzọ ụfọdụ na Sibenik wee si ebe ahụ were ụgbọ ala mpaghara. Usesgbọ ala na-agba ọsọ kwa ụbọchị, afọ niile, ma enwere ọrụ na Skradin na Lozovac, ebe enwere ụzọ ọzọ na ogige ahụ. You nọ na Zagreb? Mgbe ahụ i nwere ike jidere a ụgbọ ala kpọmkwemma ọ bụ were awa anọ na ọkara. You nọ na Dubrovnik? Enweghị ụgbọ ala ọ bụla na n'ihi anya, nke na-abụghị obere, adịghị eje ozi dị ka njem otu ụbọchị Ọbụna ị ga-eme atụmatụ ihe dị ogologo karị ma gafere Split ma ọ bụ Sibenik.
Tiketi ịbanye ogige nwere ike zụrụ na website. N'agbata June na August na tiketi ndị ọzọ dị oké ọnụ, banyere 200 Kuna kwa okenye na 120 maka ụmụaka n'etiti 7 na 18 afọ. Site April ka June na site na September na October 110 na-eto eto okenye na 80 kwa nwata na site na November na March 30 na-eto eto. Julaị na Ọgọstụ, ọ bụrụ na ị banye tupu elekere anọ ị na-akwụ ụgwọ, 4 kwụrụ.
Tiketi ndị a gụnyere njem ụgbọ mmiri site na Skradin ruo Skradinski na site na Lozovac ruo Skradinski, mana ị kwesịrị ịma na n'oge oyi ha anaghị arụ ọrụ. I nwekwara ike ịzụta tiketi n'ọnụ ụzọ ogige, ma ọ bụrụ na ị gara n'oge ọkọchị, tụlee na enwere ndị mmadụ mgbe niile. Enwere tiketi dị ọnụ ala karịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga leta ụfọdụ ngalaba nke ogige ahụ. Matakwu gaa na weebụsaịtị.
Ogige ahụ, na mgbakwunye ya waterfalls mara mma, ọ bụ ebe nwere ọtụtụ ahịhịa na ahịhịa. Enwere ụdị osisi 800, ihe na-akpụ akpụ na amphibians, ụdị nnụnụ 200 na ụdị ụsụ 18 na-ebi ebe a. Mana mmiri mmiri bụ ihe na-adọta ndị njem.
Mmiri mmiri a na-etinye uche na nnukwu ọdọ mmiri okike, nwere mmiri doro anya, ebe mmiri mmiri ahụ jikọtara n'ụzọ dị egwu. Ọ bụ ihe Skradinki na e nwere ụfọdụ 17 mmiri mmiri nke dị elu dị iche iche mana ya na ọdịiche dị n’etiti nke mbụ na nke ikpeazụ nke 47 mita elu. N'ihi ya, ọ bụ mmiri mmiri kacha ogologo na osimiri ma taata i nwere ike ihu igwe eji ano mmiri, ufodu ochie, ndi ozo eweghachitere.
Ọzọ a maara nke ọma na nsụda mmiri bụ Roski mara mmiri mmiri ma ọ bụ nnukwu nsụda mmiri n'ihi na ọ dị elu karịa mita 22. ụra pụtara, na Croatian, nsụda mmiri. Ọ bụ n'ezie usoro nke 12 mmiri mmiri na ohere nke mita 450 nke kachasị elu nke 22 na ọkara mita na 60 mita n’obosara.
Saịtị ndị ọzọ ama ama bụ Visovac Island na ebe obibi ndị mọnk Krka. Ebe obibi ndị mọnk ahụ bụ nke Ọtọdọks nke Ọtọdọks ma malite na narị afọ XNUMX. Nwere ike ịga na ya Byzantine ụka ya ochie Roman catacombs. N'aka nke ya, agwaetiti ahụ nwere ebe obibi ndị mọnk ọzọ, mana nke Franciscan, nke sitere na narị afọ nke XNUMX, na nchịkọta nke efere ochie na akwa na ọbá akwụkwọ dị oké ọnụ ahịa.
N’ikpeazụ, Kroeshia gafere ndị Rom ya mere ị pụrụ ịhụ nzọ ụkwụ ndị a na ebe ochie nke Burnum / Pujlane: ihe foduru nke amphitheater nke Rome na ogige ndị agha na ngosipụta nke ihe ndị na-adị kwa ụbọchị, ngwa ọrụ na ngwa ọgụ ndị Rome.
Na ọtụtụ ihe ịhụ na ịma na mmiri n’ebe niile, ụzọ kachasị mma iji mezuo njem ahụ bụ jikọta ogologo ije na njem ụgbọ mmiri. Ọtụtụ n'ime ụgbọ mmiri ndị a na-ahapụ Skradin. Njegharị ndị a na-enye gị ohere ịghọta oke mma mara mma nke ogige ahụ n'ụzọ zuru oke, gụnyekwa nhọrọ nke ịkwụsị na ịga ije ma ọ bụ ịgba àmà nduzi ndị nduzi.
Nwere ike igwu mmiri ebe a? Ajuju siri ike. Hụrụ foto ndị a na ị chọrọ ịgba ọtọ ozugbo. Ee, megidere saịtị ndị ọzọ na Croatia ee ị nwere ike igwu mmiri mana ọ bụghị mgbe niile. Na weebụsaịtị ha na-ekwukarị ma ọ kwere ma ebee. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị si Dubrovnik bịa, dị ka anyị kwuru, ebe dị anya dị ogologo ma ọ ga-adị mma ka ị mee atụmatụ iji ụbọchị ole na ole. Nwere ike ịnọ ezigbo nso na ogige ahụ, na Skradin, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ dịtụ anya, na Sibenik. Kechioma!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Croacia » Ogige Krka National, Croatia
Ihe ị ga-ahụ na Pokhara, Nepal